जलविद्युत् कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब, शेयरधनीलाई बाँड्दै ५० करोड नगद लाभांश !
साढे दुई लाख सर्वसाधारण सेयरधनी, २ अर्ब रुपियाँ उठाइएको
| 2018-01-11 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई ५० करोड रुपियाँ नगद लाभांश बाँड्ने भएको छ ।
उक्त रकम कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम हो ।
यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी हाल १० अर्ब रुपियाँ छ । जलविद्युत् कम्पनीमा संस्थागत ७ र साढे दुई लाख सर्वसाधारण सेयरधनी रहेको बताइएको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणबाट २ अर्ब रुपियाँ उठाएको थियो । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेकाले कम्पनीको शुक्रबार बस्ने छैटौं वार्षिक साधारणसभाले लाभांश बाँड्ने निर्णय गर्ने कम्पनीले जानकारी दियो ।
सेयरपुँजी र जगेडा कोषमा रहेको रकमसमेत जोड्दा कम्पनीमा हाल करिब ११ अर्ब रुपियाँ छ ।
उक्त कम्पनीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै साढे ७ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार सो रकमबाहेक अहिलेसम्म डेढ अर्ब रुपियाँ निकासा भइसकेको छ ।
यस कम्पनीले विद्युत्सँग सम्बन्धित ५ कम्पनीमा स्वपुँजी लगानी गरेको छ ।
कुनमा कति प्रतिशत स्वपूँजी ?
कम्पनीले पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल (पिटिसिएन) मा १४ प्रतिशत, रेमिट हाइड्रो कम्पनीमा शतप्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ४ प्रतिशत, एनइए इन्जिनियरिङ तथा पावर ट्रेड कम्पनीमा १५/१५ प्रतिशत र फुकोट कर्णालीमा १० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गरेको छ ।
यी ५ कम्पनीमा ३४ करोड रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ । हालसम्म कम्पनीले ५ सय ४१ मेगावाटका आयोजनामा ६ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरिसकेको छ ।
कहिले स्थापना यो कम्पनी ?
जलविद्युत् विकासमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले तत्कालीन उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा २०६८ असार २७ गते उक्त कम्पनीको स्थापना भएको थियो ।
बिहीबार, पुस ०७४
सिक्टा अन्तर्गतको डुन्डुवा सिँचाइको ...
यो वर्ष पनि दिएन तामाकोसीले विजुली ! ...
किन तोडियो रघुगंगा जलविद्युत्को ठेक्...
कहाँ पुग्यो ‘मेलम्ची आयोजना’को सुरुङ...
१४ वर्षदेखि अलपत्र जाल्पादेवी आयोजना...
संसदीय समितिको ठहरः ‘सिक्टा’मा ठेकेद...
‘रुदीखोला–ए जलविद्युत’को निर्माण सम�...
५०० रोपनी जग्गामा बन्दै ढल प्रशोधन के�...
रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना रोक�...
सिक्टा प्रकरणः दोषी देखिए कन्ट्र्याक...
२१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस�...
जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठ�...
बिमस्टेक सम्मेलनको उपलब्धि, ग्रिड इन�...
मुलककै ठूलो ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालन...